Silver Shoulder Transparent Clear 15ml 30ml 50ml Cos ...
Square Bottom Shape PET ၀ င်ငွေအဖုံးပလတ်စတစ်အလှ ...
25% ပြန်လည်အသုံးပြုပလပ်စတစ် Eco-friendly PCR Material Packa ...
ပယင်း PET Lotion ပုလင်းပလပ်စတစ်ခေါင်းလျှော်ရည်ပုလင်း ...
အမျိုးသားများအတွက်အရေပြားထိန်းသိမ်းမှုပစ္စည်းများအနက်ရောင် Airless Pump ပုလင်း ...
1 ပြွန် dual- ကုန်သည်ကြီးများအသင်းပြွန်များတွင် 2
၁။ စွမ်းရည် - ၂၅ မီလီမီတာအပေါင်း ၂၅ မီလီယံ၊ ၃၀ မီလီမီတာအပေါင်း ၃၀ မီလီယံ၊ ၂။ အသစ် - ပုံသေနည်းနှစ်ခုသည်အခန်းပြွန်နှစ်ခုကိုဖြည့်ပြီးသီးခြားစီထွက်လာပြီးပေါင်းစပ်ပါ။
PET ပစ္စည်းစီးရီးထုပ်ပိုး lotion Toner ပုလင်း
1. TE04 အသုံးမပြုနိုင်သောစုပ်စက်မျက်လုံးခရင်မ်ပုလင်း၊ ဇင့်အလွိုင်းပစ္စည်းသက်ဆိုင်သောရွေးချယ်မှု။ ၂။ PET ပစ္စည်းစီးရီး ၁၂၀ml lotion ပုလင်း၊ 200ml Toner ပုလင်းနှင့် 50ml Cream အိုးတထုပ်ထုပ်။ 3. TB08 ၁၀၀ မီလီမီတာကောင်းသောအမှုန်အမွှားပုလင်း
မတူညီသောလျှောက်လွှာတင်သူများနှင့်အတူ Airless Eye Cream သွေးရည်ကြည်ပုလင်း
မတူညီသောလျှောက်လွှာရှင်များနှင့်အတူ 1. Airless Eye Cream သွေးရည်ကြည်ပုလင်း။ ကျောင်းသားများအတွက် ၂.၀ မီလီမီတာအိတ်ဆောင်လက်သန့်ရှင်းဆေးဘူး။ 3. Flip Top နှင့် Sprayer ပါသော PET ပုလင်းများရှိသည်။
တိကျသောပုံစံဒီဇိုင်းအမြှုပ် Pump ပုလင်း
TB01 ရေမြှုပ်ရေပုလင်းပုလင်းပုံသဏ္designာန်ဒီဇိုင်း၊ ကြွယ်ဝသောပိုးသားရေမြှုပ်အလှကုန်များ။ PA12 Airless ပုလင်းအစားအစာတန်း PP ပစ္စည်းသည်မှုန်ရေမွှားသုတ်ဆေးမရှိဘဲ matte effect ဖြစ်နိုင်သည်။ PJ42 PCR Jar ၁၀၀% ပြန်လည်အသုံးပြုပလပ်စတစ်၊ PP-PCR ပစ္စည်းခရင်မ်ဘူးသည်ဒီဇိုင်းပိုသည်။
Deodorant ပုလင်းနှင့် Dropper ပုလင်း Cream အိုးအစုံ
PDD01 Deodorant ပုလင်းတိကျသောပုံသဏ္shapeာန်ဒီဇိုင်း၊ ဖန်ထည်နှင့် 10ml deodorant နှင့်သံမဏိပစ္စည်းနှင့် roller ball ။ PA16 Airless ဘူး PP ပစ္စည်း၊ စိတ်ကြိုက်အရောင်နှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းကိုလက်ခံပါသည်။ PDW01 Dropper ပုလင်းနှင့် PJW01 Cream Jar Glass ပစ္စည်း၊ ပိုးမွှားမှရေမှုန်ရေမွှားများ၊
Dual Chamber ဘူးနှင့် Eco-friendly PCR Airless ဘူး
PL19 100ml နှစ်ထပ်ကုန်ပုလင်းနှစ်မျိုးသည်ထုတ်ကုန်နှစ်မျိုးကိုဖြည့်သည့်အခန်းနှစ်ခန်းပါအတွင်းပုလင်းတစ်ချိန်တည်းတွင်ပုံသေနည်းနှစ်မျိုးကိုထုတ်ပစ်သည်။ TA04 AS Airless ပုလင်းဂန္ထဝင်ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းပုံစံ၊ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်အရောင်နှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းကိုလက်ခံခဲ့သည်။ PA66 ပဲ့တင်သံ - PCR Airless ပုလင်း Topfeelpack သည် ...
လေ့လာသုံးသပ်သူ Mac Mackenzie ၏ထုတ်ပြန်ချက်အရ PET ပုလင်းများဝယ်လိုအားမြင့်တက်နေသည်။ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင်ဥရောပ၌ rPET ၀ ယ်လိုအားသည် ၆ ဆတိုးလာမည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ Wood Mackenzie မှလေ့လာဆန်းစစ်သူ Pieterjan Van Uytvanck ကတော့ ...
၁။ အညစ်အကြေးမရှိသောပုလင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ လေထုနှင့်ထိတွေ့ခြင်းနှင့်ဘက်တီးရီးယားများကိုမွေးမြူခြင်းဖြင့်ထုတ်ကုန်ကိုဓာတ်တိုးခြင်း၊ အဆင့်မြင့်နည်းပညာအယူအဆသည်ထုတ်ကုန်အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ ဖြတ်သန်းသောလေဟာနယ်ပုလင်း ...